Ngaba Iintlekele Zemvelo Zibubungqina Bokuba UThixo Ukhohlakele?
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgabere IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUruund IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
OKO KUDLA NGOKUTHETHWA NGABANTU: “NguThixo olawula ihlabathi yaye nguye obangela iintlekele; ngenxa yoko ukhohlakele.”
OKO KUFUNDISWA YIBHAYIBHILE: “Ihlabathi liphela lisemandleni ongendawo.” (1 Yohane 5:19) Ngubani lo ‘ungendawo’? IBhayibhile ithi nguSathana. (Mateyu 13:19; Marko 4:15) Ngaba kunzima ukuyamkela loo nto? Khawuyicinge ngolu hlobo le nto: Ukuba uSathana uphethe ihlabathi, ngoko ke nguye owenza abantu bazicingele, babawe baze benze izigqibo zobudenge njengaye. Iyodwa nje le nto isenza sisibone esona sizathu sokuba abantu beye bawonakalisa umhlaba. Iingcali ezininzi zilumkisa ngelithi ukonakaliswa kwendalo kusenokufak’ isandla kwiintlekele zemvelo, kubangele ukuba zenzakalise abantu abaninzi kakhulu kunokuba bekuya kuba njalo xa abantu bebewuphethe kakuhle umhlaba.
Kutheni uThixo evumela uSathana enze unothanda? Ukuze sifumane impendulo kufuneka sibuyele ekuqaleni xa uAdam noEva bala ukulawulwa nguThixo. Ukususela ngoko, abantu abaninzi baye balandela loo mvukelo yabo bazali bethu bokuqala. Ukungavumi kwabantu ukulawulwa nguThixo kuye kwabenza balawulwa lutshaba lukaThixo uSathana. Yiloo nto uYesu wabiza uSathana ngokuba ‘ngumlawuli wehlabathi.’ (Yohane 14:30) Ngaba uSathana uza kulawula ngonaphakade? Hayi!
UYehova * uyakhathazeka xa ebona abantu behlupheka ngenxa yezinto ezenziwa nguSathana. Ngokomzekelo, xa uSirayeli wehlelwa ziintlekele, iBhayibhile ithi ngoThixo: “Ebudeni bokubandezeleka kwabo konke wabandezeleka.” (Isaya 63:9) UThixo uye wasenzela inceba, kuba kungekudala uza kuluphelisa ulawulo lukaSathana olukhohlakeleyo! Ubeke uNyana wakhe uYesu Kristu ukuba abe nguKumkani onobulungisa nokusesikweni yaye uza kulawula ngonaphakade.
KUTHENI UMELE UBE NOMDLA: Nangona uSathana engakhange abakhusele abantu kwiintlekele zemvelo, uYesu yena uza kubakhusela. Kaloku uYesu wakha wakhusela abafundi bakhe kwisaqhwithi. IBhayibhile ithi: “Wawukhalimela umoya waza wathi kulwandle: ‘Yithi tu! Uzole!’ Wadamba umoya, kwabakho ukuzola okukhulu.” Abafundi bathi: “Ngubani ngokwenene lo, le nto ade athotyelwe ngumoya nalulwandle?” (Marko 4:37-41) Oku kuyasiqinisekisa ukuba uYesu uza kubakhusela bonke abo bazithobayo kulawulo lwakhe xa enguKumkani.—Daniyeli 7:13, 14.
^ isiqe. 5 UYehova ligama likaThixo elichazwe eBhayibhile.